साङ्ग्ला, जुम्रा, मुसा भगाउन देखि सर्प को बिष मार्न सम्म अत्यन्तै उपयोगी तेजपत्ता जान्नुहोस् « गोर्खाली खबर डटकम
तेजपत्ता पनि घरेलु औषधीले भरिपुर्ण गुण भएको पात हो । यसले माछा, मासुका परिकार स्वादिलो बनाउनको लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ । तर यसको औषधीय गुणको बारेमा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसले स्वादको मात्र काम नगरेर अचुक औषधीको काम गर्छ ।
यस्तै धेरै फाइदाहरु छन् जुन तेजपातको प्रयोगले प्राप्त गर्न सकिन्छ । यहाँ हामीले त्यस्तै जानकारीहरु संकलन गरेका छौँ । कृपया पढ्नुहोला ।
तेजपत्ताका फाइदा यस्ता छन्
१. सर्पको विष झार्छ
३. निद्रा राम्रो लाग्छ
४. नाकबाट रगत बग्न रोक्छ
५. रुघा–खोकी ठीक पार्छ
६. मस्तिष्कको क्षमता बृद्धि गर्न